သုံးပွင့်ဆိုင်ဇာတ်လမ်းရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ထပ်ပြီးမြင်တွေ့ရဦးမယ့် Kwak Dong Yeon – Trend.com.mm
သုံးပွင့်ဆိုင်ဇာတ်လမ်းရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ထပ်ပြီးမြင်တွေ့ရဦးမယ့် Kwak Dong Yeon
Posted on October 14, 2018 October 8, 2018 by Noel
“My ID is Gangnam Beauty” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ မင်းသားချော Kwak Dong Yeon ကိုမှတ်မိကြသေးတယ်ဟုတ်!အဲ့ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာခေါင်းဆောင်မင်းသားမဟုတ်ပေမဲ့ ဆရာချောချောလေးကို ကြွေကြတဲ့ပရိသတ်တွေရှိနေပါတယ်။သူတို့အတွက်သတင်းကောင်းလေးလို့ပြောရမလား??
Moonlight Drawn by clouds၊ Fight My Way၊ Into the world again၊ Radio Romance စတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ အရံနေရာကနေစတင်ပါဝင်ခဲ့ပြီး My ID is Gangnam Beauty ဇာတ်လမ်းတွဲမှာတော့ ပရိသတ်တွေပိုပြီးသတိထားမိလာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ကြိုးစားမှုတွေကြောင့် Kwak Dong Yeon ဟာ မကြာခင် SBS က ရိုက်ကူးတော့မယ့်ဇာတ်လမ်းတွဲသစ် ‘Revenge is back’ မှာ ပါဝင်ဖို့ကမ်းလှမ်းခံရပြီး သူကိုယ်တိုင်ကလည်းလက်ခံသရုပ်ဆောင်မယ်လို့ သူ့ရဲ့အေဂျင်စီ FNC Entertainment က အောက်တိုဘာ ၅ရက်နေ့က အတည်ပြုကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာ I’m not Robot မင်းသားချော Yoo Seung Ho လည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး မင်းသမီးကတော့ Jo Bo Ah ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇာတ်လမ်းပုံစံက အထက်တန်းကျောင်းမှာ အကြမ်းဖက်မှုနဲ့မှားယွင်းစွာစွပ်စွံခဲ့ရပြီးကျောင်းထုတ်ခံရတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်က သူ့ကိုဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့အချစ်ဦးနဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကို ပြန်ပြီးလက်စားချေတုံ့ပြန်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းမှာ Yoo Seung Ho က ကျောင်းထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ကျောင်းသားအဖြစ်ခေါင်းဆောင်နေရာကပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး မင်းသမီး Jo Bo Ah က သူ့ရဲ့ အချစ်ဦးအဖြစ်သရုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။Kwak Dong Yeon ကတော့ Jo Bo Ah နဲ့အတူ Yoo Seung Ho ကိုကျောင်းထုတ်ခံရအောင်လုပ်လိုက်တဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်အဖြစ် Supporting Role နေရာက ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာလည်း သူ့ကို သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ဇာတ်လမ်းရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်မြင်တွေ့ရမှာပါ။
Revenge is Back ဇာတ်လမ်းတွဲကိုတော့ ဒီဇင်ဘာလမှာစတင်ပြသဖို့ရည်ရွယ်ထားပြီး နေ့ရက်အတိအကျတော့ မသတ်မှတ်ရသေးပါဘူး။ပရိသတ်တွေချစ်တဲ့မင်းသား၊မင်းသမီးတွေချည်းပဲဖြစ်တဲ့အပြင် ဇာတ်လမ်းလေးကလည်းဆန်းဆန်းလေးဖြစ်လို့ အကြိုက်တွေ့ဦးမယ့်ဇာတ်လမ်းတွဲကောင်းဆိုတာသေချာပါတယ်။စောင့်မျှော်အားပေးကြဦးနော်
“My ID is Gangnam Beauty” ဇာတျလမျးတှဲမှာပါဝငျခဲ့တဲ့ မငျးသားခြော Kwak Dong Yeon ကိုမှတျမိကွသေးတယျဟုတျ!အဲ့ဒီဇာတျလမျးတှဲမှာခေါငျးဆောငျမငျးသားမဟုတျပမေဲ့ ဆရာခြောခြောလေးကို ကွှကွေတဲ့ပရိသတျတှရှေိနပေါတယျ။သူတို့အတှကျသတငျးကောငျးလေးလို့ပွောရမလား??
Moonlight Drawn by clouds၊ Fight My Way၊ Into the world again၊ Radio Romance စတဲ့ဇာတျလမျးတှဲတှမှော အရံနရောကနစေတငျပါဝငျခဲ့ပွီး My ID is Gangnam Beauty ဇာတျလမျးတှဲမှာတော့ ပရိသတျတှပေိုပွီးသတိထားမိလာခဲ့ပါတယျ။သူ့ရဲ့ကွိုးစားမှုတှကွေောငျ့ Kwak Dong Yeon ဟာ မကွာခငျ SBS က ရိုကျကူးတော့မယျ့ဇာတျလမျးတှဲသဈ ‘Revenge is back’ မှာ ပါဝငျဖို့ကမျးလှမျးခံရပွီး သူကိုယျတိုငျကလညျးလကျခံသရုပျဆောငျမယျလို့ သူ့ရဲ့အဂေငျြစီ FNC Entertainment က အောကျတိုဘာ ၅ရကျနကေ့ အတညျပွုကွညောခဲ့ပါတယျ။
ဒီဇာတျလမျးတှဲမှာ I’m not Robot မငျးသားခြော Yoo Seung Ho လညျးပါဝငျမှာဖွဈပွီး မငျးသမီးကတော့ Jo Bo Ah ဖွဈတယျလို့သိရပါတယျ။ဇာတျလမျးပုံစံက အထကျတနျးကြောငျးမှာ အကွမျးဖကျမှုနဲ့မှားယှငျးစှာစှပျစှံခဲ့ရပွီးကြောငျးထုတျခံရတဲ့ကြောငျးသားတဈယောကျက သူ့ကိုဒုက်ခပေးခဲ့တဲ့အခဈြဦးနဲ့ကြောငျးသားတဈယောကျကို ပွနျပွီးလကျစားခတြေုံ့ပွနျဖို့ကွိုးစားတဲ့ပုံစံလေးဖွဈပါတယျ။
ဒီဇာတျလမျးမှာ Yoo Seung Ho က ကြောငျးထုတျခံလိုကျရတဲ့ကြောငျးသားအဖွဈခေါငျးဆောငျနရောကပါဝငျမှာဖွဈပွီး မငျးသမီး Jo Bo Ah က သူ့ရဲ့ အခဈြဦးအဖွဈသရုပျဆောငျမှာဖွဈပါတယျ။Kwak Dong Yeon ကတော့ Jo Bo Ah နဲ့အတူ Yoo Seung Ho ကိုကြောငျးထုတျခံရအောငျလုပျလိုကျတဲ့ကြောငျးသားတဈယောကျအဖွဈ Supporting Role နရောက ပါဝငျမှာဖွဈပါတယျ။ဒီဇာတျလမျးတှဲမှာလညျး သူ့ကို သုံးပှငျ့ဆိုငျအခဈြဇာတျလမျးရဲ့ တဈစိတျတဈပိုငျးအဖွဈမွငျတှရေ့မှာပါ။
Revenge is Back ဇာတျလမျးတှဲကိုတော့ ဒီဇငျဘာလမှာစတငျပွသဖို့ရညျရှယျထားပွီး နရေ့ကျအတိအကတြော့ မသတျမှတျရသေးပါဘူး။ပရိသတျတှခေဈြတဲ့မငျးသား၊မငျးသမီးတှခေညျြးပဲဖွဈတဲ့အပွငျ ဇာတျလမျးလေးကလညျးဆနျးဆနျးလေးဖွဈလို့ အကွိုကျတှေ့ဦးမယျ့ဇာတျလမျးတှဲကောငျးဆိုတာသခြောပါတယျ။စောငျ့မြှျောအားပေးကွဦးနျော
ပရိသတ်တွေအသိနည်းသေးတဲ့ Ace Ji Hyo အကြောင်းလေး